Qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo gurmad ahaan ugu sii jeeday Goofgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo gurmad ahaan ugu sii jeeday Goofgaduud
Qarax aad u xoogan ayaa maanta lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo gurmad ahaan ugu sii jeeday deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30-km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Inta la xaqiijiyay 6 askari ayaa ku geeriyootay, tiro intaas ka badanne waa ku dhaawacantay, kadib markii miino dhulka lagu aasay ay la kacday gaariga ay ciidankaasi saarnaayeen.
Deegaanka Goofgaduud ee gobalka Bay, ayaa waxaa saakay ku dagaalamay ciidanka dowladda oo garab ka helaaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhinac ah iyo dagaalyahanadda Al-shabaab.
Ciidanka qaraxa ku geeriyooday ayaa la sheegayaa inay kasoo amba-baxeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay, si ay ugu gurmadaan ciidanka kale oo maanta lagu weeraray deegaanka Goofgaduud, kuwaas oo haatan ku sugan duuleedka deegaankaas.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo ay weerar culus ku qaadaan deegaanka Goofgaduud, halkaas oo ay haatan gacanta ku haayaan dagaalyahanadda Al-shabaab.
Illaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, waxaana haatan aad u kacsan xaaladda deegaanka Goofgaduud, iyadoona dadka deegaanka ay cabsi weyn lasoo daristay.